Injabulo uthisha enqatshelwa ibheyili | Isolezwe
Injabulo uthisha enqatshelwa ibheyili
Isolezwe / 23 November 2012, 1:26pm /
Abezinhlangano ezibhekele ukuphathwa kwezingane nomphakathi bejabula enkantolo yase Scottburg kunqatshwa isicelo sebheyili kuthishanhloko ngamacala okudlwengula.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Uthishanhloko onqatshekwe ibheyili ngamacala okudlwengula yinkantolo yase Scottburg nommeli wakhe.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
UKHIHLE isililo waphuma ebhokisini lofakazi esula izinyembezi uthishanhloko waseNjabulo Senior Primary School ngemuva kokuthi iNkantolo yeMantshi yaseScottburgh imnqabela ibheyili.
Izolo uthishanhloko ubefake isicelo sebheyili ngemuva kokuthi icala lahlehla ngesonto eledlule ummeli wakhe uMnuz Sithembiso Mbhele wacela ukuthi abuyekezwe wonke amacala ayebhekene nomsolwa njengoba ayefike okokuqala kuleli cala.
Kube nokujabula kumalungu omphakathi waseMahlongwa lapho kufundisa khona lo thisha ngesikhathi iMantshi uMnuz Giel Van Aarde etshela umsolwa ukuthi ngenxa yobucayi bamacala abhekene nawo ngeke kube wubuhlakani ukuthi bamdedele ngebheyili ngoba umphakathi uthukuthele.
Kuleli cala ummeli kathisha uqale wafunda incwadi efungelwe lapho umsolwa abebhale khona izinto ezimenza acele ukuphuma ngebheyili.
Kule ncwadi uthe amacala abhekene nawo akawazi futhi ufuna ukubuyela emsebenzini ngoba umndeni wakhe ubheke yena kukho konke.
Ethula incazelo efuna umsolwa angaphumi ngebheyili umphenyi wecala uSgt Bhekithemba Nzama uthe uma ephuma njengoba kuchaza incwadi efundwe wummeli wakhe ethi ufuna ukubuyela emsebenzini, izingane ezithintekayo kulolu daba kuzoba nzima ukuthi zibuyele esikoleni.
“Kukhona izingane ezintathu esezivele ngaphambili ezilinde isinqumo sanamhlanje ukuthi uma umsolwa engaphumi ngebheyili zikwazi ukuvula amacala okuthi wazidlwengula.
“Umsolwa mabi kakhulu amacala abhekene nawo ngakho izingane abezifundisa zizosaba ukuya esikoleni uma eke waphuma ngoba impilo yazo isengcupheni,” kusho uNzama.
Uthe enye yezingane okusolwa ukuthi yahlukunyezwa wumsolwa isanda kuthola ucingo luyazisa ukuthi uma ike yaba wufakazi wombuso izofa.
“Kuningi okungaphazamisa uphenyo njengoba umsolwa singazi ukuthi uma ededelwa yini angayenza. Izingane kuyimanje sizigcine endaweni la kungazi khona muntu njengoba bezikhala ngokusatshiswa. Nokuphepha kwakhe kungaba sengcupheni njengoba amalungu omphakathi engenza noma yini kuye uma ededelwa,’’ kuqhuba uNzama.
Kuleli cala eligcine lihlehlela uDisemba 21, iMantshi ithe kusamele kuqhubeke uphenyo njengoba esemaningi amacala avelayo ngomsolwa.